ဆိုင်ကယ် Taxi လဲ မယုံရ ကား Taxi မယုံရတဲ့ခောတ် “မောင်ကံကောင်းလေး ကံဆိုးရှာလေပြီ” – Tameelay
အွန်လိုင်းမှာ လူကြိုက်များနေတဲ့ ချစ်စရာကလေးဓါတ်ပုံများရဲ့ ကြေကွဲစရာ ဖြစ်ရပ်မှန်လေး
ညီလေး ညီမလေး ဖတ်ဖို့
ဘဝအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများ
ဆိုင်ကယ် Taxi လဲ မယုံရ ကား Taxi မယုံရတဲ့ခောတ် “မောင်ကံကောင်းလေး ကံဆိုးရှာလေပြီ”
ကလေမြို့ကနေ လိုက်ပါလာတဲ့ မောင်ကံကောင်းလေးတစ်ယောက်ကျွဲဆည်ကန် ကားဝင်းကို ဒီနေ့ မနက် စောစောမှာရောက်လာပါတယ် ။
အသက် အားဖြင့် ၁၆ နှစ်ဝန်းကျင်သာရှိသေးတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပါ. ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ဆိုင်ကယ်တက္ကဆီဌားပြီး သူဆက်လက်ထွက်ခွာမည့် ချပ်သင်းမြို့သို့သွားသော အောင်ရတနာကားဂိတ်ကို သို့ ပိုဆောင်ခိုင်းရာ ဆိုင်ကယ် တက္ကဆီမှ လက်မှတ်လိမ်လည်ရောင်းချသော ၃၂ လမ်းလူလိမ်များဂိတ်သို့ပို့ဆောင် ပေးခဲ့ပါတယ် ။
အဲဒီဂိတ်ရောက်မှ လက်မှတ်ခ ကျသင့်ငွေ ကျပ်နှစ်သောင်းပေးဆောင်ခဲ့ရပြီး ပါလာသော ခရီးဆောင်အိတ်အားရှာဖွေ စစ်ဆေးချင်းများပြု့လုပ်ခဲ့ကြောင်းနောက်ပီး ကိုယ်ခန္တာပါစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း ပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
အဲလောက်ရှာနေတော့ စိတ်တိုပြီး ခင်ဗျားတိုကလည်းဗျာ ဒီလောက်ရှာနေတာ အားမရသေးဘူးလား ဘောင်းဘီချွတ်ပြရမလား လို့ပြန်ပြောလိုက်တော့ မိုက်ရိုင်းလိုက်တာဆိုပြီး ထိးုကြိတ်လွတ်လိုက်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ပါတယ် ငွေလည်းလိမ်သေးတယ် လူကိုလည်း ထိုးကြိတ်လွတ်လိုက်ပြီးမှ အောင်ရတာနာဂိတ်ကိုလိုက်ပို့ပါတယ်အလားတူကိစ္စမျိုးတွေ အခုတစ်လော နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ လူကြီးမင်းများအား သိရှိစေရန်နှင့် ပြင်းထန်စွာ အရေးယူပေးပါရန် ခရီးသွားမိဘပြည်သူများကိုယ်စား အသနားခံ တင်ပြရခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်းစိမ်မကောင်းခြင်းများစွာဖြင့်
Credit Paw Oo(လှုပ်လှုပ်ရှားရှား မန္တလေးသတင်းများ)
ကလမွေို့ကနေ လိုကျပါလာတဲ့ မောငျကံကောငျးလေးတဈယောကျကြှဲဆညျကနျ ကားဝငျးကို ဒီနေ့ မနကျ စောစောမှာရောကျလာပါတယျ ။
အသကျ အားဖွငျ့ ၁၆ နှဈဝနျးကငျြသာရှိသေးတဲ့ လူငယျလေးတဈယောကျပါ. ရောကျတယျဆိုရငျပဲ ဆိုငျကယျတက်ကဆီဌားပွီး သူဆကျလကျထှကျခှာမညျ့ ခပျြသငျးမွို့သို့သှားသော အောငျရတနာကားဂိတျကို သို့ ပိုဆောငျခိုငျးရာ ဆိုငျကယျ တက်ကဆီမှ လကျမှတျလိမျလညျရောငျးခသြော ၃၂ လမျးလူလိမျမြားဂိတျသို့ပို့ဆောငျ ပေးခဲ့ပါတယျ ။
အဲဒီဂိတျရောကျမှ လကျမှတျခ ကသြငျ့ငှေ ကပျြနှဈသောငျးပေးဆောငျခဲ့ရပွီး ပါလာသော ခရီးဆောငျအိတျအားရှာဖှေ စဈဆေးခငျြးမြားပွု့လုပျခဲ့ကွောငျနောကျပီး ကိုယျခန်တာပါစဈဆေးခဲ့ကွောငျး ပွနျလညျပွောပွခဲ့ပါတယျ။
အဲလောကျရှာနတေော့ စိတျတိုပွီး ခငျဗြားတိုကလညျးဗြာ ဒီလောကျရှာနတော အားမရသေးဘူးလား ဘောငျးဘီခြှတျပွရမလား လို့ပွနျပွောလိုကျတော့ မိုကျရိုငျးလိုကျတာဆိုပွီး ထိုးကွိတျလှတျလိုကျတယျလို့ သိရှိရပါတယျ။
ပါတယျ ငှလေညျးလိမျသေးတယျ လူကိုလညျး ထိုးကွိတျလှတျလိုကျပွီးမှ အောငျရတာနာဂိတျကိုလိုကျပို့ပါတယျအလားတူကိစ်စမြိုးတှေ အခုတဈလော နစေ့ဉျရကျဆကျ ဖွဈနတေယျဆိုတာသကျဆိုငျရာတာဝနျရှိ လူကွီးမငျးမြားအား သိရှိစရေနျနှငျ့ ပွငျးထနျစှာ အရေးယူပေးပါရနျ ခရီးသှားမိဘပွညျသူမြားကိုယျစား အသနားခံ တငျပွရခွငျးသာ ဖွဈပါကွောငျးစိမျမကောငျးခွငျးမြားစှာဖွငျ့
Credit Paw Oo(လှုပျလှုပျရှားရှား မန်တလေးသတငျးမြား)
More From Tameelay
ငွေကြေးထက် သူ၏ နဂိုမူလ ရုပ်ရည်လေးသာ ပြန်လည်ရရှိလိုရှာတဲ့ ပွင့်ကေခိုင်အတွက် တရားမျှတမှုလိုနေပြီ
နေအိမ်ခြေရင်းဘက်နံရံတွင် အစီအရီကပ်ထားသည့်အလှဓာတ်ပုံများကို မပွင့်ကေခိုင်တစ်ယောက် ရီဝေသောမျက်လုံးများဖြင့် ငေးကြည့်နေသည်။ ဓာတ်ပုံထဲတွင် အသက်(၂၀) ကျော်အရွယ် အပူအပင်ကင်းမဲ့နေ သော အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးက ၎င်းကို ပြုံးပျော်ရွှင်လန်းစွာ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ကြည့်နေသည်။ ဓာတ်ပုံထဲက မိန်းကလေးငယ်သည် အခြားသူမဟုတ်။ ၎င်းကိုယ်တိုင် ပဲဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်ည မတိုင်မီ မပွင့်ကေခိုင်တစ်ယောက် …
ကိုခင်မြင့်မောင်နောက်တယောက်ပေါ်လာပြန်ပါပြီ တာမွေမြိုနယ် အာသောက ဗညားဒလလမ်းဆုံဟာ အမြဲတမ်း ကားပိတ်တဲ့လမ်းဆုံတခုပါ ကျောက်မြောင်းရပ်ကွက် နတ်ချောင်း မေတ္တာညွန့် တို့ရဲ့အဓီက ဝင်ပေါက် ပဲ ဒီလမ်းဆုံမှာ ယာဉ်ထိန်းမရှိရင် လမ်းရှင်းသူမရှိရင် ဈေးလေးတာမွေဗလီ တောက်လျောက် ပိတ်နေတော့ တာပါ အခုဆိုရင်တော့ ဒီလမ်းဆုံမှာ ဖေါ်ရွေဖြူဟာတဲု့အပြုံးနဲ့ တာဝန်ကျေပြွန်တဲ့ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဟာ အမြဲလာရောက်လမ်းရှင်းပေးနေလို့ ရပ်ကွက်နေပြည်သူများ …
” မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့နယ်သူရဲ့ ထူးချွန်မှု ” အမျိုးသမီးဗိုလ်လောင်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၄) ရဲ့ အကောင်းဆုံးဗိုလ်လောင်းဆုကိုတော့ မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့နယ် ကဒုံစီးရပ်ကွက်နေ မိခင်လပြည့် မှရရှိ။ ဘွဲ့ရအမျိုးသမီး ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄) သင်တန်းဆင်း အရာရှိများနှင့် မိသားစုဝင်များ၏ ရင်တွင်းစကားသံများ ► ဒုတိယဗိုလ်ခင်လပြည့် ကျွန်မကတော့ ဒီသင်တန်းမှာ …
ချစားနေသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကြီး အကြောင်း.. ရှက်စရာကောင်းလိုက်တာဗျာ
မသာပါးစပ်ထဲက နှိုက်စားသူများ။ မသာပါးစပ်ထဲကတောင်နိူက်ယူတဲ့ အဆင့်ရောက်နေပါပြီလား
ကြာစွယ်စားခြင်းဟာ ဒီလောက်အထိ အစွမ်းထက်မှန်း အခုမှသိတယ်
တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ဘဝတစ်စာဟောစာတမ်း နှင့် ယတြာ
ထီပေါက်တဲ့ထီလက်မှတ်ကို လှူဒါန်းတဲ့ ထူးခြားတဲ့ အလှူရှင်
ငှက်ပျောသီး အကျွေးခံရတဲ့အကြောင်းကို “ငှက်ပျောသီး” ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ သီချင်းအဖြစ် သူကိုယ်တိုင်ရေးဆိုလိုက်ပါပြီ..။
“ကျွန်တော်ဘာလို့ အထီးကျန်နေအုံးမှာလဲ…. ?”
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးမထားတာကို လျော့ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားစိတ်ကို တိုးမြှင့်ဖို့ “
Tameelay Copyright © 2018.